Semalt - Ny fampiroboroboana ny farany SEO
Ny fampiroboroboana ny entana na serivisy amin'ny alàlan'ny Internet mampiasa ny tranokalanao manokana dia fomba iray mahomby amin'ny doka noho ny haingam-pandeha tsy manam-paharoa, ny faritra fandrakofana ary ny serasera. Ny serivisy fampiroboroboana tranonkala mitovy dia omen'ny orinasa Semalt SEO. Izay mpandraharaha / mpandraharaha tsirairay izay mandeha an-tserasera dia maniry ny hividy ny mpanjifa marobe araka izay azo atao sy hanao ny tranokalany / hisintona ny fifamoivoizana faran'izay betsaka. Ireo manam-pahaizana manokana amin'ny Semalt dia afaka manampy amin'ity asa ity. Ny orinasanay dia mihoatra noho ny SEO-optimization ihany, goavambe manerantany amin'ny sehatry ny fampiroboroboana tranonkala.
Ny fanambarana sahy toy izany dia tsy marim-pototra mihitsy. Vakio ny valin-tenin'ny mpanjifa ao amin'ny tranokalanay, jereo ny tena tranga, ary ho hainao fa ny Semalt ihany no mahavita mamita io asa io amin'ny fomba tsara kokoa. Noho ny fahombiazantsika, dia manentana tranonkala ho amin'ny toerana ambony izahay ao amin'ny milina fikarohana ary manampy ny tompony hanangona ny tenany. Mazava ho azy, raha tsy misy ny haitao teknolojia, tsy hahita fahombiazana ianao, izany no antony tsy hijanonan'i Semalt eo. Manatsara ny fomba fanaontsika hatrany izahay ary mamolavola ireo teknolojia vaovao. Tsy manana mpifaninana mitovy aminy i Semalt raha ny fahombiazanao amin'ny alàlan'ny fampandrosoana ny tranokala - ataovy miaraka amin'ny Semalt.
Ny orinasanay dia aseho amin'ny alàlan'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fomba fanolorana ny optimization tranonkala. Tsy misy dikany ny mitondra tohan-kevitra, miankina amin'ny zava-misy ihany isika, izay nohamafisin'ny valiny mahomby. Nandritra ny folo taona, niatrika ireo fanamby mahatahotra indrindra isika ary manapa-kevitra foana. Eo amin'ny rànan'ny orinasa ny zavakanto mandresy. Ny ekipa Semalt dia vondrona vondrona matihanina manerantany. Anisan'ireny ny manam-pahaizana SEO za-draharaha, ny mpitantana mahay, ny IT-manam-pahaizana manokana, ny mpanoratra mpanoratra talenta ary ny mpamorona.
Na eo aza ny haingo manokana, ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipa dia mahalala fiteny maromaro eran'izao tontolo izao ary mahafeno fepetra tsara amin'ny SEO optimization. Mandritra ny famoronana tetikasa mahay, ny ekipa za-draharaha dia mandinika ireo karazana marika rehetra miantraika amin'ny fahombiazan'ny tranokala. Zava-dehibe ny hananana eritreritra stratejika, satria ny tranokala tsirairay dia manolotra tranga iray manokana, noho izany dia mitaky fomba mifanaraka sy fomba fanatanterahana ny SEO-optimization.
SEO famerenana fohy
Ny Search Engine Optimization (SEO) dia iray amin'ireo fomba hampiakatra ny fifamoivoizana kendrena sy ny fanekena ny tranokala. Tsy teknika tokana akory, fa andiany iray manontolo mifantoka amin'ny fanatsarana ny toeran'ny tranonkalanao ao amin'ny motera fikarohana amin'ny fangatahana sasany. Na ny tranonkala mety aza dia mila ny fampiroboroboana, raha tsy izany, ny mpihaino amin'ny Internet fotsiny dia tsy hahafantatra momba ny fisiany. Izany no anton'ny fampiroboroboana SEO.
Androany, SEO lasa zavatra mihamalalaka. Ny zava-misy dia, sarotra hatrany ny milina fikarohana, noho izany dia tsy fantatra mazava hoe firy ny fangatahana ilaina hamenoana ny lahatsoratra ho an'ny milina fikarohana no alefa azy mivantana any ambony. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny milina fikarohana dia miharo hatrany ny fomba tombanavinan'ireo mpitsidika tranonkala. Mety marobe ireo marika. Io no fe-potoana antonony lanin'ny olona iray ao amin'ny tranokala sy ny tetezamita amin'ny alàlan'ny rohy anatiny. Ny olana koa dia raha mizara rohy ao amin'ny bilaogy tranonkala, tambajotra sosialy ary sehatra hafa ny mpampiasa.
Raha tsy lany ny fampahalalana eo amin'ny pejy dia hanidy ilay loharano ny mpitsidika. Raha mahita pejy iray misy tsianjery matevina feno fehezanteny misy ny fehezanteny ny mpitsidika dia avelany izy. Ny fisafidianana ny fomba hampiroboroboana SEO dia miankina amin'ny tanjony. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny mpanjifa dia mila fitomboan'ny mpitsidika ao amin'ny tranokalany izay niafara amin'ny fitomboan'ny antso, baiko, varotra. Saingy misy ny mpanjifa toa izany, izay te-hahita fotsiny ilay tranonkala eo amin'ny toerana avo ao amin'ireo masera mpikaroka mitady tanjona marika bebe kokoa. Semalt dia manana vahaolana mahomby ho an'ny tranga tsirairay. Hamarininay ny fanentanana mahomby indrindra momba ny fampiroboroboana SEO, toy ny AutoSEO sy FullSEO.
Ahoana ny fiasan'i AutoSEO
Ny fampielezankevitra AutoSEO ho fampiroboroboana tranonkala dia niparitaka be tamin'ny tompon'ny tranokala vao haingana. Ny valiny farany dia heverina ho hampiroborobo ny tranonkalanao amin'ny toerana ambony indrindra ao amin'ny milina fikarohana. Izy io dia ahitana dingana maromaro mifototra ary manatanteraka fifanarahana hentitra amin'ireo manampahaizana momba ny Semalt. Ny manam-pahaizana dia mandray andraikitra feno amin'ny fampielezan-kevitra ary manome antoka ny vokatra mahomby. Ny fanitsiana ny tranokala dia hanova tsimoramora mankany amin'ny fivoaran'ny hita eo amin'ny milina fikarohana. Fintina ny hetsika ho avy, afaka manasongadina ny asan'ny AutoSEO manaraka izahay:
Hanombohana ny fampielezana ny AutoSEO dia tsy maintsy misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay izahay. Manomboka miasa ny tranokala momba ny tranokala, ary mahazo ny tatitra voalohany momba ny toetran'ny tranonkalanao eo amin'ny milina fikarohana ianao. Ny firafitry ny tranokala dia zahana ihany koa mifanaraka amin'ny fenitra SEO rehetra. Manohy ny tatitra ianao miaraka amin'ny fampahalalana samihafa, ao anatin'izany ny lisitry ny lesoka efa fantatra. Ny fandraisanao anjara amin'ny fanatanterahana io dia mijanona kely kely, esorina daholo ny lesoka rehetra ataon'ny injeniera SEO. Ny injeniera SEO ihany koa dia hisafidy ireo teny fanalahidy marina. Ilaina ny fampivoarana ny fifamoivoizana eo amin'ny tranokala.
Ankehitriny dia zava-dehibe ny mifantina rohy amin'ny Internet mba hampidirana azy ireo amin'ny loharanom-baovao an-tserasera sasany. Ny votoatin'ny tranokala dia tokony ho manan-danja be, satria ny motera fikarohana dia tsy mahalala afa-tsy ny atiny izay misy dikany misy dikany. Mifantoka amin'ny fisafidianana loharano mifanentana amin'ny fampidirana rohy bebe kokoa i Semalt. Ireo hetsika rehetra ataon'ilay manam-pahaizana dia tsy manimba tanteraka ny tranokala; ankoatry ny mpitantana dia manara-maso akaiky ny fizotrany.
Ny dingana manaraka dia ny fanaovana ireo fiovana ilaina amin'ny tranokala. Ny manam-pahaizana dia tarihin'ny fampahalalana avy amin'ny tatitra sy FTP (File Transfer Protocol). Ny fiovan'ny tsirairay dia mandray anjara amin'ny fanatsarana famokarana mahomby, noho io dingana io dia mila fahalalana tsara amin'ny fampiroboroboana SEO ary faran'izay marina. Fantatr'i Semalt ny fanavaozana laharana rehetra ary asisika ny teny fanalahidy ilaina ara-potoana. Ny teny fanalahidy dia voamarina mba hifanaraka amin'ny votoatiny alohan'ny fampiharana. Mitohy hatrany ny fanamafisana; mbola mijanona ho mpanara-maso ianao izay mirakitra valiny tsara. Mitarika ny fanentanana AutoSEO ao anatin'ny iray volana dia mitentina $ 99.
Ny ilainao ho fantatra momba ny FullSEO
Hatramin'ny voalohany dia tokony ho marihina fa ny fanentanana feno feno FullSEO dia ny fanatsarana ny tranokala ao anatin'ny fotoana fohy indrindra azo tratrarina. Ny fampielezan-kevitra dia manome optimisation ivelany sy ivelany ilay tranokala. Ny fizotrany dia misy dingana maromaro izay anaovana azy tsirairay hampiakarana ny laharan'ny tranokala. Ny fampielezan-kevitra dia ihazan'ny mpitantana za-draharaha, fa ny hetsika dia atao mivantana amin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny SEO. Ny fahombiazan'ny FullSEO dia voamarina amin'ny valin'ny haingam-pandeha ambony amin'ny toerana ambony ao amin'ny tranokala ao amin'ny milina fikarohana. Ho fanampin'izany, tsy mamela ny mpifaninana hifanakaiky kokoa amin'ny toeran'ny tranokalanao.
Manomboka ny fampidirana ny fampielezan-kevitra FullSEO raha vao misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay izahay. Ny fisoratana anarana vita dia midika fa fanombohan'ny famakafakana ny tranokala. Ny dingana voalohany dia ny optimization anatiny. Tafiditra ao ny fijerena ny firafitry ny tranokala ary manome tatitra momba ny antsipiriany miaraka amin'ny vokatry ny famakafakana. Ankoatra izany, ny manam-pahaizana SEO dia mandinika tsara ny singa rehetra ao amin'ilay tranokala ary mamaritra ny fototry ny semantik. Ny tatitra manaraka dia mampiseho ireo lesoka rehetra fantatra, izay avy hatrany dia nahitsy. Ny Optimization dia mihetsika foana. Mba hampitomboana ny fifamoivoizana tranonkala dia mila maka ny teny fanalahidy marina isika. Ny voambolana rehetra dia voafidy am-pitandremana lehibe, satria manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fampiroboroboana izy ireo. Tamin'ny alalàn'ny fidirana amin'ny FTP, ny manam-pahaizana manokana dia manao ny fanovana ilaina amin'ny tranokala.
Ny dingana faharoa dia ny optimization ivelany. Izy io dia miditra amin'ny fampidirana rohy mankany amin'ireo loharano manokana. Zava-dehibe ny mifanaraka amin'ny mombamomba anao amin'ireo loharano ireo. Vantany vao ampidirina ireo rohy, manomboka manomboka tsara ny tranokala. Ny adidy lehibe dia eo amin'ny matihanina SEO manoloana ny fisafidianana rohy sy loharano azo itokisana. Soa ihany, miara-miasa amin'ny tranokala marobe manamarina ny fenon'ny SEO ny Semalt. Ny rohy nampidirina tao amin'ireny tranokala ireny dia mandray anjara amin'ny fampiroboroboana mahomby. Tsy ilaina ny hetsika fampielezan-kevitra ataonao, saingy fantatrao foana ny fiovana rehetra ao amin'ny tranokala. Ny tatitra tsy miova dia mampahafantatra anao momba ny fitomboan'ny isa. Azonao atao ihany koa ny mifandray amin'ilay manam-pahaizana manokana amin'ny fotoana rehetra ary mila fangatahana misy ifandraisany amin'ny tranokalanao.
Raha, noho ny antony iray, naato ny fampiroboroboana ny SEO dia tsy hitondra olana lehibe. Mazava ho azy fa hanaisotra backlink avy amin'ny rakitra data ao anatin'ny iray volana i Google, fa hijanona eo amin'ny toerana iray kosa ny laharana. Io toerana io dia tsy latsaka ambanin'ny ambaratonga izay talohan'ny nanombohan'ny FullSEO. Mba hikajiana ny vidin'ny serivisy, dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra aloha ianao. Ny vidiny farany dia ho voafaritra rehefa avy mandinika ny tranokalanao SEO. Toa tsy dia avo loatra ny vidiny fa miankina amin'ny toeran'ny tranonkalanao. Na izany na tsy izany dia mandoa intelo ny vidiny rehetra.
Momba ny Analytics
Ny fitsipika fototra amin'ny optimization SEO dia paikady tsara. Raha feno hadisoana amin'ny indexing ny tranokala ary manana olana ara-teknika, ny hany fomba ivoahana dia ny fanangonana ny antontan-kevitra an-tsoratra. Semalt dia namorona rafitra an- tsarimihetsika tokana izay ahafahana manatanteraka ny asa mahomby. Ity no Analytics, rafitra iray momba ny fanaraha-maso tranonkala tokana natokana hamantarana ireo lesoka ara-teknika sy fanitsiana azy ireo. Ny fepetra rehetra noraisina dia hitondra anjara amin'ny fahombiazan'ny tranonkala mahomby. Ambonin'izany, ny Analytics dia manome fidirana amin'ny angon-drakin'ny tranonkala mpifaninana aminao. Ny anadinika dia misy ireto asa manaraka ireto:
Ny Analytics dia tsy voafetra amin'ny famaritana ireo fahasarotana mifandray amin'ny fampiroboroboana tranonkala iray. Voalohany indrindra, dia mamaritra ny votoatin'ny lahatsoratra sy ny mari-pahaizana ara-teknika misy azy ireo. Manatanteraka fandalinana fampitahana ny tranokalan'ny mpifaninana izy io, manombatombana ny fizaram-piainany sy ny vokany. Ny fanangonana famakafakana dia manomboka aorian'ny fisoratana anarana amin'ny tranokalanay. Ny tatitra voalohany dia mampiseho ny toerana misy ny tranonkalanao eo amin'ny milina fikarohana. Ny tranonkalan'ny mpifaninana aminao dia zahana ihany koa. Noho izany, nanjary ekena tanteraka ireo zavatra miavaka amin'ny firafitr'izy ireo. Miorina amin'ity fampahalalana ity, ny manampahaizana dia manatanteraka ny fiovana ilaina, amin'ny fiheverana ny fenitra SEO.
Raha manana kaonty manan-kery ianao dia afaka manampy tranokala hafa ao amin'ny kabinetranao manokana. Ny tranokala rehetra rehetra dia nohombatina ho azy manokana, ary mandray tatitra amin'ny antsipiriany miaraka amin'ireo angon-drakitra hita. Ny algorithm motera fikarohana dia nohavaozina tamina dinika, noho izany dia ireo mpandinika ihany no mahalala tsara ny fanovana ny tranokala eo amin'ny farany ambony ao amin'ny milina fikarohana. Amin'ny fanangonana ny angon-drakitra famotopotorana dia mora ny mamaritra ny teny fanalahidy marina. Ny analyse dia manondro ireo teny fanalahidy izay mifanaraka amin'ny atin'ny tranonkala. Amin'ny fotoana rehetra, azonao atao ny mampiditra teny fanalahidy hafa na manala ireo tsy ilaina. Ity fomba ity dia hisy fiantraikany tsara amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana tranonkala.
Ny fizotry ny fanadihadihana dia atao manodidina ny famantaranandro tsy misy ny fandraisanao anjara. Ianao dia mandray ny tatitra momba ny hetsika sy ny vokatry ny hetsika rehetra. Gaga foana ny valiny, satria hitanao ny fahombiazana mahomby amin'ny tranonkala eo amin'ny milina fikarohana. Hitanao ny toeran'ny mpifaninana aminao, ary ny Analytics dia mandray andraikitra izay ahafahan'ny tranonkalanao mihoatra ny azy rehetra. Io no zava-misy miharihary, ny tranonkalanao dia ho ambony toerana foana. Tena mety hampiasa ny Application Programming Interface. Miaraka amin'ny API, ny rakitra rehetra dia ampitoviana ho azy. Ianao foana no mahalala ny fanavaozana, na dia aza miezaka. Misy ny fandoavam-bola raikitra ho an'ny serivisy fanadihadihana. Semalt dia namolavola ireto fonosana Analytics ireto:
Semalt dia manome serivisy fampandrosoana amin'ny tranonkala marobe ihany koa. Ireo manam-pahaizana dia mampihatra fomba isan-karazany amin'ny fampivoarana tranokala ara-barotra. Araka izany, ny singa momba ny tranokala dia novolavolaina mavitrika, natambatra tamin'ny rindranasan'ny antoko fahatelo ary ny Rafitra fitantanana ny votoatiny. Ny fangatahan'ny mpanjifa lehibe dia manolotra tolotra toy ny maoderina e-varotra e-commerce manokana momba ny e-varotra.
Lahatsary fampiroboroboana an'i Semalt
Ny fandraharahana iray dia mahomby ihany raha ny vokatra avy aminy miteraka valinteny ara-pihetseham-po ao anaty mpividy. Video Ad no endrika mahazatra indrindra izay miantoka ny fampiroboroboana ny vokatra sy ny serivisy nampandrenesina. Mitondra fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao ny lahatsary toy izany, izany no antony nandefasan'i Semalt ny Production Production . Ny horonantsary namboarinay dia taratry ny tombontsoa rehetra avy amin'ny orinasanao. Manolotra safidy horonan-tsary modely izahay ary araka ny tianao. Ny vidin'ny safidy faharoa dia hafa sy voafaritry ny fandinihana ny tetikasa. Video fampiroboroboana dia miantoka ny fahombiazan'ny orinasanao eo noho eo.
Ilay lahatsoratra dia mampiseho mazava ny tombony azo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Semalt. Raha ny tena izy dia misy dikany kokoa ny tombony. Tsy hanome fampanantenana tsy misy ilana azy velively izahay, satria ny tanjon'izany dia tsy amin'ny fanatsarana ny tranokala ihany. Izahay dia manolo-tena hampahory anao amin'ny fomba rehetra misy. Ny fahombiazanao dia ny fahombiazantsika, koa ampio ny orinasanao amin'ny Semalt. Aza mandany andro. Mifandraisa aminay avy hatrany. Isika manana fanalahidy hahomby amin'ny fahombiazanao!